ဆန်းဝင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း): 5/1/10 - 6/1/10
ရာသီဥတုသည် တောတောင်ကို မှီခို၏
အဟမ်း.. ဘလော့ဂ်ရေးရှိက ဘလော့ဂ်ရအံ့……..
မြန်မာပြည်တလွှား သောက်သုံးရေရှားပါးမှု ပြသနာအကြောင်း သတင်း၊ ဆောင်းပါးများ နေရာတိုင်းမှာ တွေ့ လာရ၏။ ဥတုရာသီ တောကိုမှီ ဟူသော ရှေးစကားနှင့်အညီ သစ်ပင်ဝါးပင်များ ပျက်သုန်းခြင်းက ရာသီဥတု မှီခိုရန် နေရာ မရှိဖြစ်ရလေပြီ။ ဤကား လူသားတို့ သတိချပ်ရန် အကြောင်းတရားဖြစ်၏။
ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်စဉ်ကြောင့် မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းရှိ ကျွန်တော့်၏ဇာတိမြေ ကျောက်ပန်းတောင်းကို အထူး သတိရမိ၏။ ကျွန်တော် ကျောက်ပန်းတောင်းသားပါဟု ပြောရန်ပင် ခပ်ရှက်ရှက်ဖြစ်နေ၏။ အကြောင်းမူ ကျွန် တော် ၏ ဒေသန္တရ၊ ဘာသန္တရ ဗဟုသုတ နည်းပါးမှု ကြောင့်ပင်ဖြစ်၏။ သို့သော် သိသလောက်ဖြင့် ရေးချင် စမ်း၏။
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်သည် နွေရာသီတွင် ပူပြင်း ခြောက်သွေ့၍ သောက်သုံးရေရှားပါ၏။ ကျေးရွာအချို့တွင် အ၀ီစိတွင်း တူးဖေါ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်။ ကျွန်တော်တို့ တောင်စဉ်ချောင်း ဘေးရွာ တန်းရှည်ရွာများ (လက်ပန်ကျင်း၊ လယ်ကြီး၊ ပေါက်တော၊ ညောင်ပင်သာ၊ အိမ်အို၊ စည်းကန်၊ မုံကန်း၊ သရက်တော၊ ချောင်းချား၊ စည်သာ၊ အောင်ပဒေသာ၊ မန်ကျီးကုန်း၊ တတောဦး) အ၀ီစီတွင်း တူရန်လွယ်ကူ၏။ အနည်းဆုံး ပေ ၁၀၀ ဆိုလျှင် သောက်ရေသန့်ရ၏။ ကြက်မောက်တောင်ဆည်၊ မုန်ငန်းဆည် - ဆည်ရေ သောက် ဧရိယာအတွင်းရှိသော ရွာများဖြစ်၍ လယ်လုပ်ငန်း၊ ကိုင်းလုပ်ငန်း၊ ယာလုပ်ငန် များဖြင့် စည်ပင်၏။
အ၀ီစိတွင်းတူဖေါ်ရန် ခက်ခဲ နက်နဲသော ကျေးရွာများတွင် နွေအခါ သောက်သုံးရေရှားပါ၏။ နွေရာသီ ရေရှားချိန်တွင် “ရေတစ်မြူ သားအဖ လေးယောက်ချိုးတာ မွန်းသွားသည်” ဟုပင် အဆိုရှိ၏။ အချို့ ရွာများတွင် မိုးအခါက စုဆောင်းထားသော ကန်ရေကို ချွေတာ သုံးဆွဲရ၏။ အချို့မှာမူ စမ်းရေကို သာ အားကိုထားရ၏။ ကျွန်တော်သိသော နွေအခါ ရေရှားတတ်သော ရွာများမှာ အိုင်မင်း၊ လွန်ပင်ကုန်း၊ ဟင်းခွက်အိုင်၊ ရလု၊ ပေါက်သစ်၊ မဲတီး၊ စမ်းမြိုင်အေး စသည်ရွာများဖြစ်၏။ ရေရှားပါးသော ကျေးရွာများတွင် နွေအခါ ရေရှာခြင်းလုပ်ငန်းကိုသာ အားစိုက်လုပ်ရ၏။ စိမ့်စမ်းအိုင် များတွင် နေ့ရောညပါ စောင့်ဆိုင်း ခပ်ယူ ရ၏။ တရံတခါတွင် ရေအတွက် ခိုက်ရန်များလဲဖြစ်ရတတ်၏။
ထို့အပြင် လူစုကာ ခြောက်ခန်းသွားသော ကန်များ ဘောင်တင်ခြင်း၊ ကန်တူးဖေါ်ခြင်းများ မိုးမကျမှီ ပြင် ဆင်ရပြန်သည်။ ကန်ဘောင်တူးခြင်း ရေကူ ရေလွဲများထားခြင်းမှာ ခန့်မှန်းဖြစ်သောကြောင့် တခါတရံတွင် မိုးရာသီ မိုးရေကြီးကာ ဆည်ဘောင် ကျိုးပေါက်မှု များ ဖြစ်တတ်သည်။ ထိုသို့ ဆည် ဘောင်ကျိုးပေါက်ခဲ့ပါက နွေအခါ သောက်သုံးရေ အတွက် လုံးဝ ရှားသွားမည်ဖြစ်သည်။
နွေအခါ သောက်သုံးရေရှားပါးသော ဒေသများ ပုံမှန်အခြေနေတွင် လူရော တရိစ္ဆာန်ပါ ကန်ရေနှင့် စိမ့်စမ်းရေ ချွေတာသုံးကာ မိုးရာသီ မိုးရေဖြင့် အသက်ဆက် လည်ပတ်ကြသည်။ ယခုကြားသိနေရသော မြန်ပြည်တလွှား သောက်သုံးရေ ရှားပါးမှု ပြသနာသည် မိုးဦးကျ နောက်ကျခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ထက်ပို၍ မိုးဦးကျ ဘာကြောင့်နောက်ကျရသနည်း။ သင်္ကြန်အခါက မိုးဘာကြောင့် မရွာရသနည်း။ စသောမေးခွန်းများကို ဖြေရန် မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုစူးစမ်းလေ့လာသူတို့သာလျှင့် ပြည်စုံစွာ တင်မြနိုင်လိမ်မည်။ ကျွန်ုပ်ကား မ၀ံ့။
လက်ရှိအချိန်တွင် လုပ်ဆောင်ရန်မှာ သောက်သုံးရေ ပြတ်လက်သော ဒေသများသို့ ရေအလှူ ပေးဝေခြင်းသာ အမွန်မြတ်ဆုံးဖြစ်၏။ တစ်ဆက်တည်းပင် ရာသီဥတုသည် တောတောင်ကိုမှီခိုကြောင်း ပညာပေးခဲ့လျှင် ပို၍ ကောင်း မည်ဖြစ်သည်။
DatE Sunday, May 16, 2010 LaveL ရေရှားမှု ပြသနာ0comments link this
ကျွန်တော်တို့ လက်ပန်ကျင်း (တောင်ရွာ၊ အလယ်ရွာ၊ ညောင်ရွာ၊ သီးကုန်း) အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်း သို့ ရန်ကုန်မြို့ရောက် ဦးချစ်ရွှေ မိသားစုမှ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းမည်ဟုသိရပါသည်။
(ယခင်က သီးသန့် စာကြည့်တိုက် အဆောင်မရှိသေး)။
သင်္ကြန်မတိုင်ခင်က စတင်ဆောက်လုပ်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ယခုကျွန်တော် စာရေးနေချိန်တွင် စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်နေမှုမှာ ပြီးဆီးနေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ဆောက်လုပ်မည့်နေရာမှာ လက်ပန်းကျင်း အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်းဝန်းအတွင်း သုတဆောင် ကျောင်းဆောင်၏ အရှေ့ဘက်တွင်ဖြစ်သည် ဟုသိရသည်။
ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀တည်းက ပညာသင်လာခဲ့သော ကျောင်းတော်ကြီးတွင် ကျောင်းစာကြည့်တိုက် အဆောင်အဦ အခိုင်အမာ တည်ရှိလာသောကြောင့် အလွန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ လူငယ့်အားမာန် အဖွဲ့အနေဖြင့် ယခင်နှစ်မှ စတင်ကာ စာအုပ်များလှူဒါန်းခြင်းအား လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အတိုင်း ယခုနှစ်တွင်လည်း ကျောင်းစာကြည့်တိုက်သို့ စာအုပ်များ တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းသွားဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။
စာကြည့်တိုက်အလှူရှင် ဦးချစ်ရွှေ ၏ အတုယူဖွယ်ဘ၀ ဖြတ်သန်းမှု။
- ဦးချစ်ရွှေသည် ငယ်စဉ်က လက်ပန်ကျင်း (ညောင်ရွာ) တွင် အမိအဖ များနှင့်အတူ နေထိုင်ခဲ့သည်။
- လေးတန်းအောင်ပြီးနောက် ကျောင်းဆက်နေလိုသော်လည်း မိဘများမှ ကျောင်းထွက်စေခဲ့သည်။
- ကျောင်းမတက်ရသော်လည်း စိတ်မညစ်။
- ကျောင်းနေသော အတန်းကြီးသမားများထံ လေ့လာ ဆည်းပူးခဲ့သည်။
- ငယ်စဉ်ကပင် အင်္ဂလိပ်လို ပြောဆိုကာ ပညာကို မရှက်မကြောက် ရှာဖွေဆည်းပူးခဲ့သည်။
- ထိုသို့ ပညာလိုလားသည်ကို မြင်သောအခါ မိဘများမှ ကျောင်းဆက်ထားပေးသည်။
- အဌမတန်းအောင်ပြီး အလုပ်နှင့် ကျောင်းနေမည်ဟူသော စိတ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
- ပထမဆုံး အလုပ်မှာ ရန်ကုန် အမျိုးသမီးဆေးရုံ (ဂျမာခနာ) တွင် အ၀တ်လျှော် (ဒိုဘီ) အလုပ်ဖြစ်သည်။
- ရိုးသားကြိုးစားမှုကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ကျောက်မျက်ရတနာဌာနသန့်ရှင်းရေး အလုပ်သမား အလုပ်ရရှိခဲ့သည်။
- ပါမစ်နစ် အလုပ်သမားအဖြစ် လစာရရှိသောအခါ ကျောင်းဆက်နေသည်။
- အလုပ်ပင်ပန်းမှုများနှင့် ငွေကြေး အခက်ခဲ့ကြောင့် ဒသမတန်းတွင် စာမေးပွဲ ဖြေရန် စိတ်ကုန်သွားသည်။
- သိုသော် စာမေးပွဲနီးလာသောအခါ စာပေးပွဲဖြေချင်စိတ် တဖွားဖွားပေါ်လာခဲ့သည်။
- အကိုကဲ့သို့ ခင်မင်ရင်းနီးသော ဦးမြတ်ထွန်း၏ ကူညီသင်ကြားပေးမှုဖြင့် စာမေးပွဲဝင်ဖြေရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
- စာမေးပွဲအတွက် ကျောင်းစာမှလွ္မဲ၍ဘာမျှမရှိ။ နေ့ရောညာပါ စာကိုကြိုးစားသင်ယူကျက်မှတ်သည်။
- စာမေးပွဲဖြေရန် (၇) ရက်အလိုတွင် ကျောက်မျက်ပန်းပုထုရင်း ညာလက်ကျိုးခဲ့သည်။
- ညာလက် ကျောက်ပတ်တီးကိုင်းထားချိန်တွင် ဘယ်လက်ဖြင့် လက်ရေးကျင့်ကာ စာမေးပွဲဝင်ဖြေခဲ့သည်.
- မြန်မာစာပင် ဂုဏ်ထူးထွက်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
- ထို့နောက် အဝေးရာက်ဘွဲ့ယူသည်။ ကျောက်မျက်ဌာန အရာရှိတစ်ဥိးဖြစ်လာသည်။
- ၀န်ထမ်းကောင်းတံ ဆိပ်များနှင့်အတူ နိုင်ငံခြားသို့ ပညာတော်သင် သွားရသည်။
- ယခုအခါ ၀န်ထမ်းဘ၀မှ ပင်စင်ယူကာ ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့သစ်တွင် မိသားစုနှင့်အတူ နေထိုင်သည်။
- ၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လတွင် လက်ပန်ကျင်းအခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်းသို့ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းသည်။
DatE Sunday, May 09, 2010 LaveL မွေးရပ်မြေ0comments link this
နာရေးကူညီမှုအသင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း) အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ် လှူဒါန်းကြပါကုန်....
DatE Thursday, May 06, 2010 LaveL kyaukpadaung0comments link this
သာသနရက္ခိတအသင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း) နှင့် သုဂတိရှင်နာရေးကူညီမှုအသင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း) သို့ ဆရာမ ဒေါ်အေးမြင်တင်မှ တစ်ဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းသည်..
DatE Monday, May 03, 2010 LaveL kyaukpadaung0comments link this